Isu socodkii Britain & Midowga Yurub oo istaagi doona 31-ka Oktoobar | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Isu socodkii Britain & Midowga Yurub oo istaagi doona 31-ka Oktoobar
Isu socodkii Britain & Midowga Yurub oo istaagi doona 31-ka Oktoobar
(London) 18 Agoosto 2019 – Dowladda Britain ayaa ku tala jirta inay laasho isu socodka furan ee ka dhexeeya muwaadiniinta Midowga Yurub, isla maalinta ay ka baxaan Yurub, si heshiis la’aan ah.
Arrintan ayaa waxaa qorsheeysay Wasiir Gudeedka cusub ee Britain ee Priti Patel, tiiyoo ay jiraan doodo dhanka sharciga ah oo taagan.
Patel oo asal ahaan kasoo jeedda Hindiya, balse lagu tilmaamo siyaasiyad xag-jir ah oo muxaafid ah ayaa ka mid ah dadka aad u cayrsanaya inay Britain Midowga Yurub heshiis la’aan ka baxdo 31-ka Oktoobar, tiiyoo aanay dejin wax biddaal ah, sida ay qortay The Independent.
Horraan, waxay ogolaayeen inay dib u yara dhigaan laalitaanka isu socodka xorta ah ilaa inta xeer cusub lasoo saarayo, balse waxaa arrintu soo dhaafi wayday Aqalka Baarlamanka Hoose ee Commons oo isku haya waxa uu xeerkani noqonayo.
Xisbiga Liberal Democrats ayaa dhaleeceeyay go’aankan oo uu ku tilmaamay “mid aad u ba’an”, isagoo ka digey in uu go’aankani muujin doono in Ms Patel ay “gebi ahaanba xaqiiqada ka fog tahay”.
Dad badan oo British ah ayaa ka cabsanaya hubaal la’aanta iman doonta haddii ay Britain EU ka baxdo heshiis la’aan, maadaama ay wax kasta oo 27 dal kaga iman jirey xirmi doonaan, taasoo keeni karta shidaalka, cuntada, dawooyinka iwm oo go’a ama aad u yaraada.
Previous articleNin adeege makhaayadeed u toogtey inuu dalab fudud kala soo daahay + Sawirro (Meesha ay ka dhacday ayaa ka daran!)
Next article”Dhanka muranka badda, danta Kenya waxay ku jirtaa Axmed Madoobe!” – Standardmedia oo maqaal dheer qoray!